Magnetik Sweeper - China Ningbo enweghị
The isi ojiji na e ji mara nke ngwaahịa
1. The ngwaahịa adabara iji na osisi, nēfe nhazi ígwè factory, ngwaike & ngwaọrụ factory, ewu ihe owuwu, scrap ígwè egweri ebe wdg Ọma mmiri na obere ígwè, ịghasa & gbajiri ígwè powder nke a na-agbasasịkwa n'ebe ọrụ. Ọma hụ ọrụ dị ọcha na reclamation ngwaọrụ.
2. Nke a ngwaahịa bụ kwesịrị ekwesị maka dị iche iche na-arụ ọrụ na ọnọdụ ma e wezụga elu okpomọkụ.
3. Nke a na ngwaahịa nwere ike na-elu ndọta ruo ogologo oge, na ike ga-eji ugboro ugboro.
4. Nke a ngwaahịa e mere na mfe Ọdịdị, adaba na oru oma.
5. Nke a ngwaahịa na-emepụta a ike ndọta, na-eme n'ala ozugbo.
6. Ọ nwere a magnetik usoro n'ime, adaba na ngwa ngwa ebutu ígwè site inye iwu ahụ nke e mere site na ergonomics.
The isi Ọdịdị na parameters
Igwe Ọdụdọ BxC
(mm) Udi Size LxAxH (mm) Wheel n'obosara
E (mm) Aka
D (mm) Mmiri elu (mm) Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ
CT-2 Magnetik sweeper
The isi ojiji na e ji mara nke ngwaahịa 1.It na-eji na mbukota nza, ewu na saịtị agwụcha ihicha, igwe ụlọ edoghi wdg O nwere ike rụọ ọrụ nke ọma adsorb obere metal akụkụ ama esịn ke n'ala. Zobe, ihe onwunwe egweri, nhicha na-arụ ọrụ ebe.
2.It ike ga-eji na ihe ọ bụla ọnọdụ ma e wezụga na elu okpomọkụ.
3.It nwere ike na-magnetik ike ruo ogologo oge, nwere ike ji mee ihe 9 afọ.
4.It tumadi mere nke aluminum alloy, mfe Ọdịdị, ìhè na-adaba adaba, mara mma apprearance.
5.The n'akụkụ magnet chere ihu n'ala, n'ịwa ike ndọta, nwere ike 100% dị ọcha na obere metal akụkụ n'ime ya na-arụ ọrụ nso.
6. The magnetik Ọdịdị nwere ike gbanwere nwa mgba ọkụ na njedebe nke ahụ, butuo obere akụkụ conveniently na ngwa ngwa.
7. Anyị nwere ike hazie maka anyị ahịa pụrụ iche chọrọ, na-anabata OEM iji.
Magnetik Mkpa (mm)
Wheel dayameta (mm)
Mmiri Elu (mm)
Kpọtụrụ anyị maka nkọwa ndị ọzọ. Email: sales@sinemagnetic.com
Previous: magnetik ala
Osote: magnetik Chuck